Uhuru Kenyatta oo lagu amray inuu ka Qaybgalo dacwaddiisa Maxkamada ICC |
Uhuru Kenyatta oo lagu amray inuu ka Qaybgalo dacwaddiisa Maxkamada ICC
Maxkamada dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa diidday codsi ka yimid qareennada difaacaya madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta kaasoo ahaa inuusan madaxweynuhu goobjoog ka ahaan karin dhageysiga dacwaddiisa oo bishan billaaban doonta, balse maxkamadda ayaa diidday codsigasa, kuna amartay Kenyatta inuu kasoo qaybgalo dacwaddiisa oo meel xasaasi ah maraysa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP.
Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa muddo sannado ahi ay dacwad ku saabsan kaalintii ay ku lahaayeen rabshado dalkaas ka dhacay oo dad badan ku dhinteen, kuwaasoo dhacay sannadkii 2007-dii, kaddib markii lagu murmay doorashooyinkii madaxnimada.
“Maxakamaddu waxay isku raacday inay muhiim tahay inuu Kenyatta goob-joog ka ahaado dhageysiga dacwaddiisa,” ayaa lagu yiri warsaaxaafadeed ka soo baxay xarunta ICC ee dalka Holland.
Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri. “Maxkamaddu oo tixgalinaysa dacwadda oo meel xaasaasi ah maraysa inuu goobjoog ahaado Kenyatta si uu wax badan u ogaado.”
Sidoo kale, garsoorayaasha maxkamadda ICC ayaa dalbaday in dib loo dhigo dacwadda oo billaaban lahayd toddobada bishan, taasoo ay sabab uga dhigeen inay muhiim tahay inay helaan warbixinno dheeraad ah oo ay xuseen inay taageerayaan dacwadda loo haysto madaxweynaha Kenya.
Xilliga ay billaabayso dhageysiga dacwadda ayaa la sheegay inay go’aan ka gaari doonaan garsoorayaashu siddeedda bishan, iyagoo dalbaday inuu xarunta madaxdda yimaado Kenyatta marka ay dacwaddiisu furmayso.
Qareennada difaacaya madaxweynaha Kenya ayaa ku doodaya inuusan soo xaadiri karin Kenyatta maxkamadda, maadaama ay howlo badan oo ay ka mid yihiin shir uu kaga qaybgalayo Kampala toddobaadka soo socda, taasoo ay maxkamaddu gaashaanka u daruurtay.
Uhuru Kenyatta oo 52 sano jira ayaa waxaa loo haystaa shan dacwadood oo la xiriira kaalintii uu ku lahaa abaabulkii colaadihii ka dhacay Kenya oo ay ku dhinteen in ka badan kun qof oo shacab ah, ayna ku barakeen kumannaan kale.
Tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo uu madaxweynaha Kenya kasoo muuqdo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC tan iyo markii xilka madaxweynenimo ee Kenya loo doortay.
– See more at: http://hiiraan.com/news/2014/Oct/wararka_maanta2-48555.htm#sthash.O8FaL0Xh.dpuf order Malegra FXT online cheap, buy Zoloft online.